Fa maninona no malaza be ny Dubai miaraka amin'ireo mpitsidika aziatika atsimo atsinanana? | Asa - Asa, Travel DCC
Nahoana i Dubai no malaza amin'ny mpitsidika any Azia Atsimo Atsinanana?
Zavatra tokony ho fantatrao momba ny fiasanao any Dubai
Jona 7, 2019
Fialantsasatra mahafinaritra ao amin'ny Tilal Liwa Resort
Nahoana no Dubai Tena malaza amin'ireo mpitsidika aziatika atsimo atsimo?
Heverina fa efa ho ny olona 16 tapitrisa Tonga hitsidika an'i Dubai isan-taona - Ary miaraka amin'ny fitomboan'ny isan'izy ireo avy any Azia Atsimo Atsinanana tahaka an'i Singapore sy Thailand, mendrika hikaroka fotsiny ny antony mahatonga izany. Avy ao amin'ny toeram-pivarotana lehibe mankany amin'ny lavany lavorary avy any amin'ny seranan-tsambo any Atsinanan'i Azia Atsinanana, misy antony marobe Dubai dia toerana lehibe.
Nahoana no Dubai Malaza Miaraka amin'ny mpitsidika an'i Azia Atsimo Atsinanana?
Azia Atsimo-Atsinanana dia trano fonenan'ny sasany amin'ireo firenena mamokatra be indrindra eran-tany, toa an'i Vietnam sy Thailand. Ary vokatr'izany, misy ny lanjan'ny olona ambony sy ny olona hafa mandany ny heriny, ary izy ireo dia eo am-pikomiana any ho any mba haka ny vola. Dubai, miaraka ireo toeram-pivarotana maro, dia manolotra fahafahana mahafinaritra hahafahana mitroka entana lafo vidy. Miaraka amin'ireo sampana fivarotana andrefana avo lenta toa ny trano fivarotana kilalao Hamley sy ny fivarotana Bloomingdale azo alaina amin'ilay malaza Dubai Mall, misy antso be ho an'ny rehetra izay te handany.
Ny fialan-tsasatra dia mahafinaritra foana, saingy misy tombony sy fatiantoka sasantsasany amin'ny fanao tsirairay fialan-tsasatra-making. Manidina amin'ny toerana akaiky akaiky dia afaka manapotika ny lozan'ny fiaramanidina ary laniny ny fotoana nandeha, fa afaka mampihena ny haavon'ny safidy misy koa. Ampahany amin'izany fa maninona i Dubai dia malaza amin'ireo mpitsangatsangana South East Azia dia ny toerana mahafinaritra azy eo anelanelan'ny halavitra sy ny trangany fohy. Ny sidina mivantana avy any Bangkok mankany Dubai dia maharitra adiny enina ora fotsiny, raha toa ka fito taona monja ny Ho Chi Minh City mankany Dubai.
Betsaka ny orinasam-pitaterana maro manolotra tolotra amin'ny làlana eo anelanelan'ny metropolisy any Azia Atsinanana Tatsimo sy Dubai. Emirates, no zotram-pirenen'i Dubai sy ny faritra hafa an'ny Emirà Arabo Mitambatra, mitantana ny maro amin'izy ireo - fa Cathay Pacific, China Southern ary hafa azo isafidianana ihany koa. Ary na dia mihazakazaka ara-potoana sy arak'izay efa nomanina ny ankamaroan'ny sidina dia mendrika ihany izany Travel fiantohana amin'ny Miaro tena amin'ny zava-mitranga tsy ampoizina ianao rehefa mandeha, toy ny fanafoanana na olana amin'ny fitaterana.
Ary koa dia misy ihany koa ireo fitoviana ara-kolotsaina misy eo amin'i Azia Atsimo sy ao Dubai. Misy ny fialam-boly sasany, toy ny fisotroan-toaka, tsy dia malaza loatra any atsinanan'i Azia atsinanana: Indonezia, ohatra, dia manana indostrian'ny toaka be mpanaraka indrindra noho ny mponina miozolomana. Ity karazam-pandrosoana ity dia nidina tsara tao Dubai, satria manohitra ny lalàna amin'ny fisotroana toaka any amin'ny ankamaroan'ny firenena.
Dubai dia mitazona fampanantenana maro ho an'izay te-hitsidika azy, ary ny zavatra rehetra amin'ny fividianana kolontsaina dia atolotra eto. Izany dia manazava ny antony mahatonga ny olona hijanona any amin'ny Powerhouse Power Eastern isan-taona, ary nahoana no mety ho malaza be amin'ny taona ho avy izany.
Dubai City Company manome tsara izao mpitarika ho an'ny asa any Dubai. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hanampy fampahalalana ho an'ny fiteny tsirairay ho anay Jobs in Dubai Guides. Noho izany, amin'izao fahatsapana izao, afaka mahazo torolalana, toro-hevitra sy asa any Emirà Arabo mitambatra amin'ny fiteninao manokana ianao.